Filmy News | Artist Khabar | Page 2
Filmy News	‘लालटिन’को फस्टलुकमा दयाहाङ रार्इ	पुस, काठमाडौं । चलचित्र ‘लालटिन’को फस्टलुक सार्वजनिक गरीएको छ । फस्टलुकमा अभिनेता दयाहाङ रार्इलाई देखाइएको छ । आउँदो चैत १८ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने यस चलचित्रमा दयाहाङ राइ, प्रियंका कार्की, केकी अधिकारीको मुख्य भुमिका रहेको छ ।
एमसन पिक्चर्स प्रालिको ब्यानरमा तयार भएको यस चलचित्रलाइ देवकुमार श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन्..	‘लुट २’ को ट्रेलर सार्वजनिक, हेर्नुस कत्तिको मनपर्छ	पुस, काठमाडौं । चलचित्र 'लुट २' को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक गरीएको छ । निश्चल बस्नेत निर्देशित यस चलचित्रमा दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, विपिन कार्की, ऋचा शर्मा, कर्मा, सुशिलराज पाण्डे लगायतका आर्टिस्टहरु मुख्य भुमिकामा छन् । माधव वाग्ले र नरेन्द्र महर्जनले निर्माण गरेको यस चलचित्र आउँदो फागुन १३ बाट प्रदर्शन हुने तयारीमा छ ।
एक कार्यक्रमका..	‘थ्रि मङ्किज’को पोष्टर सार्वजनिक, तिनैजना एउटीको पछि	पुस, काठमाडौं । चलचित्र थ्रि मङ्किजको पोष्टर सार्वजनिक गरीएको छ । आउँदो माघ २८ गते प्रदर्शन हुने तयारीमा रहेको यस चलचित्रको पहिलो पोष्टरमा तिनजना पात्र एक नारीको पछि लागेको देखाइएको छ । चलचित्रमा तिनजा पात्रको मुख्य भुमिका रहेको छ ।
भाईराम श्रेष्ठ निर्देशीत चलचित्रलाई निरेन श्रेष्ठले निर्माण गरेका हुन् । ‘थ्रि मङ्किज’मा रेशम फिरीरी,..	निखिलको ‘किङ’मा देखिएको ‘लातको भुत’ (भिडियो)	पुस, काठमाडौं । यहि पुस २८ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको निखिल उप्रेती अभिनित चलचित्र 'किङ'मा समावेश 'लातको भुत' बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । जस गीतभित्रै निखिलको एक्सन देखाइएको छ ।
रामजी लामिछानेको नृत्य निर्देशन रहेको यस गीतमा संजय लामाको छायांकन रहेको छ । सविर श्रेष्ठको निर्देशनमा बनेको यस चलचित्रलाई जयन श्रेष्ठले..	चलचित्र ‘डायरी’को ‘माया माया’ बोलको गीत सार्वजनिक (भिडियो)	पुस, काठमाडौं । आउँदो चैत ११ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्र 'डायरी'को माया माया बोलको गीत सार्वजनिक गरीएको छ । टिजर सार्वजनिक भएसँगै चर्चामा रहेको चलचित्र 'डायरी'को यसअघि सार्वजनिक गीतपनि दर्शक स्रोताले राम्रै मनपराएका छन् ।
सार्वजनिक गीतमा मानस राजको शब्द, संगीत तथा स्वर रहेको छ भने अल्मोडा राना उप्रेतीको एरेन्ज रहेको छ । अनिल योञ्जनको..	ग्याङ्गस्टार ब्लूजमा संयम पुरी पनि रहने पक्का, अन्य आर्टिस्ट २५ गते छानिने	पुस, काठमाडौं। चलचित्र ग्याङ्गस्टार ब्लूज मा संयम पुरी पनि रहने भएका छन् । फागुन बाट फ्लोरमा जाने ग्याङ्गस्टार ब्लूजमा आना शर्मा र आशिरमान देशराज मुख्य भुमिकामा रहने यस अघि बताइ सकिएको छ ।साथै यसअघि रोजिशा शाही ठकुरी अनुबन्धीत भएकी थिईन् ।
सरोज न्यौपानेले निर्माण गर्ने यस चलचित्रमा अन्य को को आर्टिस्टहरु हुनेछन् भन्ने बारे अझै टुंगो..	“हिटलर”को म:म: चाउमिन सार्बजनिक, पाईनेछ फरक स्वाद (भिडियो)	नेपाली सिनेमा हिटलरको एक गीतको अडियो सार्बजनिक भएको छ । म:म: र चाउमिन बोलको सार्बजनिक गीतले छोटै समयमा दर्शक श्रोताको मिठो साथ पाएको छ । लोचन घिमिरेको शब्द तथा संगीतमा रहेको गीतलाई लोचन र श्रेया सोताड्गको आवाजमा सुन्न सकिन्छ ।
आउँदो बर्षको जेठ १२ गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गरिएको सिनेमा ‘हिटलर’को अडियो गीतलाई अनिमेसन शैलीमा प्रस्तुत..	५१ दिन मनाएको ‘जात्रा’ले अहिलेसम्म कति कमायो ?	पुस, काठमाडौं । नेपाली चलचित्र 'जात्रा'ले पनि ५१ दिन मनाएको छ । पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रहरुले राम्रो ब्यापार गर्दै गरीरहेका बेला जात्राले पनि आफ्नो ५१ दिन मनाउँदै सुखद ब्यापार गर्दै गएको छ ।
शनिबार जात्रा टिमले कुमारी हलमा केक काट्यो । प्रदिप भट्टराई निर्देशीत यस चलचित्रले अहिलेसम्म २.५० ग्रस कलेक्सन गरेको बताइएको छ । चलचित्रलाई..	चलचित्र ‘राधे’को फस्टलुक सार्वजनिक, निखिल बनेका छन् कमान्डो	पुस, काठमाडौं । नायक निखिल उप्रेतीको मुख्य भुमिका रहेको चलचित्र 'राधे'को फस्टलुक सार्वजनिक गरीएको छ । नायक निखिल उप्रेती कमान्डोको अवतारमा देखिएका छन् ।
नयाँ बर्षको दिन (वैशाख १ गते) चलचित्र प्रदर्शनको तयारीमा जुटेको छ । हरि ओम् सिने मेकर्सको ब्यानरमा तयार भएको यो चलचित्रलाई सुशिल पोख्रेलले निर्माण गरेका हुन् ।
चलचित्रमा लेखन तथा..	धादिङको गल्छीमा चलचित्र सुटिङ युनिटको गाडि दुर्घटना, ५ जना घाइते	पुस, काठमाडौं । चितवनको नारायणगढ तर्फ जाँदै गरेको चलचित्र सुटिङ युनिटको गाडि धादिङमा दुर्घटनामा परेको छ । धादिङको गल्छीमा बुधबार 'ब्याई फ्रेण्ड' नामको फिल्म सुटिङ युनिट बस दुर्घटना हुँदा ५ जना घाइते भएका छन् । घाइते मध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ ।
चलचित्रका निर्देशक मदन घिमिरेले दिएको जानकारी अनुसार स्पोर्ट, लाइट र कुन..	Pages:«1234567...35»
Recent Posts	‘थुर्के थैली’ पछि ‘छक्का पन्जा’को ‘पूर्व पश्चिम रेल’ पनि युट्युवमा १ करोड पटक हेरीयो
मुसहर बस्ती निर्माणका लागी अस्ट्रेलियाबाट धुर्मुस सुन्तलीलाई १७ लाख सहयोग
सुटिङ सेटबाट फर्कँदै गर्दा नायिका नम्रता श्रेष्ठ दुर्घटनामा
पुरानै कलाकारहरुको प्रेरणाबाट आएका हौं हामी: नवगायक भरत परियार